Phakathi neminyaka engama-30-40 edlule, imboni yezokwelapha isiye yaqala ukusebenzisa i-lasers. Namuhla imithi ye-laser ikhula ngokusheshayo, evumela ukuthi ithole izindlela ezintsha zokulungiswa nokuphathwa kwezifo ezihlukahlukene zomzimba womuntu.
Ukuthandwa kakhulu kwelashwa laser kungenxa yokuthi uma uthatha imithi, nemiphumela emibi ingenzeka ukuthi kuthinte kabi isilwane kakade esingenampilo. Futhi, izidakamizwa zingaba umlutha kwizingxenye zokwakhiwa, okuyinto, ngokufanele, ukunciphisa ukusebenza komuthi wonke futhi kubeka umphumela wayo ukungabaza.
Izindlela zokwelashwa zanamuhla, njenge-magnetic-laser therapy "i-Milta-F-5-01", ivumela isikhathi esifushane kanye nomthelela omkhulu ukuphatha wonke umzimba ezifweni zobubanzi obubanzi. Idivayisi enjalo ivuselela umzimba, ivuselele isimo jikelele somzimba futhi isetshenziswe kabanzi kokubili ezikhungweni zezokwelapha nasekhaya. Ngesikhathi esifanayo, intengo engabizi iyathathwa kuqala ngelayisensi ye-MILTA magneto-infrared. Amanani amadivaysi aqala kusuka kuma-ruble ayizinkulungwane ezingu-15 kuya kuma-ruble ayizinkulungwane ezingu-25, ngokuya komthamo wedivayisi nokucushwa kwawo.
Mayelana ne-"Milta" laser
Inqubo ye-laser therapeutic iyindlela yokwelashwa lapho izici ezine zokupheka zithinta umzimba: imisebe ye-infrared, imisebe ye-laser LED, insimu yamagnetic kanye nemisebe ye-LED ebomvu. Ngokuba izinqubo zisebenzisa umshini womshini "Milt". Idivayisi yalesi sakhiwo inokulinganisa okuncane, kulula ukuyisebenzisa futhi inokwethenjelwa.
Inqubo yokwelapha laser kwenzeka uma idivayisi kuthonywa izindawo ezithile zomzimba ngokusho izigaba ezikhethiwe ngokukhethekile isifo ngasinye. Lo mphumela uphephile ngokuphelele futhi awubuhlungu.
Iphaneli yokulawula ithuluzi elilula ukuyisebenzisa, ukulungiswa kokulungiswa, kanye nemfundo yezindlela zokwelashwa ezifakwe kulesi sakhi kwenza amakhemikhali e-Milta larapy therapy angcono kakhulu ekusebenziseni hhayi kuphela ezikhungweni zezokwelapha, kodwa nasekhaya.
Idivaysi ikhiqiza ukwelashwa kwama-laser "i-Milt-F-5-01" yomkhiqizi wezinhlobo ezimbili: enekhono lokusebenza kusuka kwinethiwekhi futhi nebhethri eyakhelwe ngaphakathi. Imodeli yesibili ifaka ishaja, ngakho-ke le divayisi iyoba yindlela enhle kakhulu yokwelapha kwezokwelapha endleleni, emsebenzini noma ngokuzilibazisa. Idivaysi isebenza kwimodi yezokwelapha ngaphandle kokuvuselelwa okungeziwe kwamahora amabili.
Ukulawulwa kwe-microprocessor, ukubonisa uhlobo lwedijithali, inzwa yokuthola imisebe, i-timer, umsindo ne-alamu yedijithali, nokukhanya okukhanyayo endaweni ekhanyayo - konke lokhu kuqukethe Amapayipi omshini "Milt". Idivayisi Kuphelile ukubeka isibonelelo semfundo lapho zonke izincomo zokwenza ukwelashwa ngesifo ngasinye sokukhonkolo ziqoshiwe.
Uma ngabe ufisa, umthengi angalawula imishini eyengeziwe nge-tripod ekhethekile, izibuko ezivikelayo ezivela ku-LI (imisebe ye-laser) nama-buses ane-LED.
Ukwelapha nge-apparatus "Milt"
Idivayisi ye-laser therapy "i-Milt" isetshenziswa njengendlela yokwelapha yethonya emzimbeni. Kuyenzeka uma imiphumela yangaphandle ezindaweni ezithile ezithintekile zomzimba wesiguli. Umphumela olandelayo we-physiotherapeutic uyaphawula:
Insimu emandla enamandla;
Imisebe ye-infrared laser infrared;
Ukushisa kwe-spectrum ebomvu;
Ukushisa kwe-spectrum yokukhanya okuhlaza okwesibhakabhaka;
Umshini okhanyayo we-infrared spectrum.
Ngaphezu kwalokho, ngayinye yalezi zici ingasetshenziswa noma ngayinye noma inhlanganisela. Umthelela onjalo emzimbeni ungokwemvelo ngakho-ke awunayo imiphumela emibi.
Izinzuzo eziyinhloko zedivayisi
Ngokusekelwe emitholampilo namuhla, ungathola amadivaysi amaningi ahlukene ekwelapheni i-LI, kodwa kaningi njengendlela yokwelapha ephumelela kakhulu Amapayipi omshini "Milt". Idivayisi yalesi model inenzuzo eziningana:
Isayizi ephelele - ikuvumela ukuba usebenzise ngaphandle kokubopha endaweni ethile, ukuthwala, uma kunesidingo, uthathe nawe ohambweni;
Iphaneli yokulawula elula futhi enomsebenzi;
Isimiso esilula sokusetshenziswa esingadingi amakhono akhethekile noma imfundo yezokwelapha, ingasetshenziswa ekhaya eyedwa;
Ukwelashwa kwe-laser akusizi, kuphephile futhi akudingi ukusetshenziswa kwemithi;
Izifo eziningi ezihlukahlukene zomzimba zingalungiswa nge-laser;
Ukukwazi ukulawula amandla emisebe yesifunda ngasinye;
Ukungenzeka kwamamodeli wenkinga yokuhlela;
Ukukhanya okubomvu nokwesibhakabhaka.
Ngabe iziphi izinyathelo zomshwalense we-laser ezibonisiwe
Izifo eziningi ezihlukahlukene zingelashwa uma unendlela efana ne-laser therapy etholakalayo. Idivayisi "Milt", ukubuyekezwa kwayo yonke imisebenzi ezobonisa ukusebenza kwayo ephakeme, isetshenziselwa ukwelashwa kwezifo eziningi ezahlukene:
Ngezinkinga zokuhlinza (izibazi ezivela ngemuva, izilonda zokudubula, izilonda ezihlanjululwe, ezikhonjiwe, i-trophic, i-erysipelas, ukushisa, i-frostbite, njll);
Ukulimala egazini lezitho ezingezansi (thrombophlebitis, postthrombophlebitis phakathi nokukhushulwa, i-endarteritis atherosclerotic ne-obliterans);
Izilonda ezibuhlungu (amaqabunga amathambo, ukuvuvukala kwamathambo nemisipha);
Izifo ze-osteoarticular tishu (i-arthrosis, i-osteoarthritis, i-polyarthritis, i-bursitis, i-osteochondrosis, isithende esithendekile);
Izifo ze-CNS ze-neuropsychiatric (izinqubo zokuvuvukala kwamathambo ezinzwa - i-neuritis, i-radiculitis, i-neuralgia, i-polyneuritis, kanye nezifo ze-neuropsychic zombuso we-borderline);
Izifo zamalungu omzimba (isilonda se-peptic, i-gastritis, i-hepatitis, i-pancreatitis, i-cholecystitis nezinye izibilini);
Isifo senhliziyo nemithambo yegazi (isifo somfutho wegazi, isifo somzimba womzimba, i-angina pectoris ye-etiology ehlukene, i-arrhythmia);
Izifo zokuvuvukala zesimiso sokuphefumula (i-bronchitis, i-asthma, i-pneumonia nezinye izifo ezingapheli ngesikhathi sokukhubaza);
Izinkinga zemizimba (izinqubo zokuvuvukala, ubuhlungu besifo esikhathini sokuqala);
Izinkinga zokuhlukunyezwa (amatshe emgodini we-urinary, i-cystitis, i-prostatitis);
Ukuphazamiseka kwesimiso se-endocrine (izinkinga zesifo sikashukela - i-angiopathy, izilonda ze-trophic, i-retinopathy, kanye ne-hypothyroidism, i-thyroiditis);
Izifo zesikhumba (i-pyoderma, i-herpes, i-eczema, i-neurodermatitis, ukubonakaliswa kwe-allergen esikhumbeni);
Izifo ze-ENT izitho (sinusitis, ukuvuvukala kwe-larynx, pharynx ne-tonsils, i-rhinitis yazo zonke izinhlobo ezingenzeka, i-otitis engapheli nabanye);
Amazinyo (izinqubo zokuvuvukala ezicukwaneni zezinsini, izinambuzane zomlomo zomlomo, i-periosteum, i-hypersensitivity yezinyosi zamazinyo, ukuhlukumezeka kwesikhala somlomo, isikhathi se-postoperative).
Amamodi nesicelo sabo
Izifo ezihlukahlukene zidinga uhlelo lokwelapha ngabanye, yiyo kanye le misebenzi ukuthi idivayisi laser "Milt" ine. Idivayisi ingahle isethelwe isifo esithile nokuziphatha ukwelashwa okufanele. Imiyalo ihlanganisa ulwazi oluningiliziwe mayelana nokuthi yimiphi imigomo etholakalayo nokuthi ungalungisa kanjani amadivayisi we-laser "Milt". Izinhlobo ze-regimen ngayinye ingasetshenziswa ukuphatha izifo eziningi ezahlukene. Ngakho-ke, kunezinhlobo ezinhlanu eziyisisekelo zokulungiswa ngezimpawu ezivamile kanye nokuhleleka kokulungiswa kwezifo ze-etiology ehlukene:
Isikhathi sokuphila. Isetshenziselwa ukubuyisela nokuqinisa ukusebenza kahle kwazo zonke izinhlelo zeselula emzimbeni wesiguli.
I-prostatitis engapheli. Umbuso uhloselwe ukwelashwa kwezifo enkambweni engapheli futhi enzima eveza ubuhlungu be-syndrome nenqubo yokuvuvukala.
Ubuhlungu obukhali. Imisebe ye-Laser lapho kulungiswa idivayisi kule mode kuzosiza ukuqeda izifo ezindaweni ezinokuhlungu okubuhlungu, uhlobo lwe-spastic, oluthiwa luqinile, luvutha futhi "luvutha" izinzwa zokuzwa ubuhlungu.
I-arthritis . Imiphumela emzimbeni wezokwelapha zokwelashwa izifo ezibangelwa ukuvuvukala kwamalungu, imigamu, imisipha. Futhi i-UL isetshenziswe njenge-photomodifier yegazi lapho imilayezo iqondiswa ezindaweni ezingathintekayo ezithintekayo, ubhedu nesibindi.
I-atherosclerosis . Idivaysi ngqo ithinta uhlelo lwezinthambo, kubhubhisa ukwakheka kwemikhumbi ye-atherosclerotic nature.
Idivayisi ye-laser therapy "i-Milt" idinga ukuphatha ngokucophelela kanye nezinye izinyathelo zokuphepha. Ngakho-ke, abantu abaneminyaka engaphezu kwengu-18 bayavunyelwa ukusebenza, kuyilapho igumbi elihlonyelwe ngokukhethekile noma ukuba namakhono athile akudingeki. Akuvunyelwe ukuqondisa i-laser ibhambeka emehlweni kanye neyunithi ishintshiwe futhi isebenza! Kuyingozi ukukhomba i-laser ezintweni ezinokubukeka, njengezindandatho, izibuko, izinto ze-chrome. Ungashiyi uhlelo lokusebenza olungalindelwe futhi ulisebenzise ngezinhloso ezithile.
Ukusebenza ngedivayisi ye-laser, kufanele ulandele izincomo zomkhiqizi, okushiwo encwadini yokufundisa yedivayisi yaseMilt. Ngaphambi kokuba uqale, kufanele uhlole intambo yelasi nekhebula ukuze kusetshenziswe umonakalo kugobolondo, kanye nobuqotho bedivayisi ngokwayo. Uma kusetshenziselwa uhlelo lokusebenza, kubalulekile ukuthi uhlole ukuthi izinkomba ezikhanyayo nezedijithali zepaneli yokulawula zikhanyiswa, kungakhathaliseki ukuthi kukhona ukukhanya kokukhanya kwe-laser emitter kudivayisi, nokuthi ngabe isignali yomsindo womsindo isisindo.
Ngokwelashwa kwe-laser isiguli sifakwa endaweni enezingqimba noma sihlezi, ukuphela kwesilawuli kusetshenziselwa endaweni ethintekile. Ngaphambi kokusebenzisa, i-laser iphathwa nge-ethyl alcohol (96%), noma ifilimu evikelayo isetshenziswa kudivayisi. Uma kwenzeka indawo ephathwayo inezindawo eziphawulekayo, ibonakala ihlukaniswe yaba yizigaba futhi igxiliwe ngokwehlukana. Isikhathi esiphelele sokuchayeka kwilayisensi akumele sidlule imizuzu engu-10.
Ekupheleni kwenqubo, isiguli kufanele siphumule imizuzu engu-15, futhi uma kungenzeka, ulale kuze kufike emahoreni amabili.
Ukuqhathaniswa nokwelashwa kwelasi
Njenganoma yikuphi ukwelashwa, ukuvezwa kwedivayisi ye-MILTA magnetic-laser kunezinombolo eziningi zokuphikisana:
I-neoplasms yezinto eziphilayo;
Izifo zegazi ezivamile;
Ukukhulelwa ngezikhathi zonke;
Izifo ezithathelwanayo zenkambo enzima;
Izinkinga zesistimu ye-endocrine ngesimo esibi;
Izifo zesimiso senhliziyo nesimo esinzima;
Ukuphazamiseka kokujikeleza kwegazi kobuchopho;
Ukungakwazi nokuphefumula kwamapulmonary okuhambisana nokuphambuka;
Ukuhluleka kwezinso nesibindi;
Izifo zengqondo esigabeni esicacile;
Ukuzwela ngokweqile kwesikhumba kuya emisebeni ye-UV.
Kuzo zonke lezi zifo, akuvumelekile ukusebenzisa idivayisi ye-laser. "Milt" - idivaysi, ukubuyekezwa mayelana nokuthi yikuphi okuhle, ayidingi ukuqokwa kukadokotela. Kodwa ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa idivaysi, kufanele usabonisane nochwepheshe ukuze akhiphe ukuphikisana nokusetshenziswa.
Namuhla abantu abambalwa basebenzise ukwelashwa kwelase njengendlela eyengeziwe yokwelapha izifo ezihlukahlukene. Ukubuyekezwa ngalunye mayelana namadivayisi we-laser therapy "i-Milt" iqukethe ulwazi lokuthi 95% ukwelashwa kunikeza umphumela omuhle. Ukuthenga idivaysi ehlanganisiwe futhi elula ukuyisebenzisa, umsebenzisi ngamunye uthola ikhambi elihle lokuqeda izinkinga ezivela emzimbeni nsuku zonke.
Indlela yokubangela igazi empeni. Izici ezicasulayo
Ukuhlanzeka kokuzwa. Ukuhlanzeka kwezitho zokuzwa
Indlela yokwazi isisindo sakho ngaphandle kwezikali: konke okuhlakaniphile kulula!
I-sanatorium yezingane "Iskra", i-Evpatoria: ikheli, ukubuyekezwa
Indlela yokunciphisa ukucindezelwa ekhaya? Izindlela
Planer wugqinsi ngezandla zabo. isikimu planers
Indlela ukushintsha igobolondo toner e mixer
Yedivayisi nokuphakamisa izinto ezisindayo: imithi, izingodo. Mshini ngoba nokuphakamisa izinsimbi
Kulabo ababhekene nezimo koqweqwe lwawo hypoplasia: izimbangela, nokwelashwa
IMessage ayicushiwe: ungalungisa kanjani iphutha
Codependency e umlutha wotshwala: kanjani ukuqeda, ukuthi baziphathe kanjani? Ukwelashwa ukudakwa codependency
Honeysuckle: ukuthi kuyini, izakhiwo ewusizo, betshala, ukunakekelwa kanye esiphelweni
Ngifundise ngesifo sikashukela: imikhiqizo iziguli sikashukela. Izimiso eziyisisekelo sikashukela umsoco
Kuyini khukhumala? Inani kanye omqondofana